DECA Pulver-Ultimate Guide Ahoana no fanaovana Decandrate Nandrolone (Durabolin)
/Blog/Gallery/DECA Pulver-Ultimate Guide Ahoana no fanaovana Decandrate Nandrolone (Durabolin)
Posted on 05 / 30 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Inona ny Nandrolone Decanoate(DECA)
Amin'izao fotoana izao dia maro ny mpandahiry bandy maniry ny mamoaka steroïde amin'ny fomba hanatsarana ny volany. Nandrolone Decanoate, fantatra amin'ny anarana hoe DECA, namidy teo ambanin'ny anarana hoe DECA-Durabolin, dia iray amin'ireo steroids mahery izay manome valiny mahatalanjona rehefa mahitsy. Raha vaovao ao amin'ny orinasa ianao, mety hanontany tena ianao hoe inona ny Deca Durabolin ary inona no azonao atao. Ireto ny sasantsasany amin'ireo endriky ny Nandrolone Decanoate (DECA) izay manavaka azy amin'ny hafa.
Nandrolone Decanoate (DECA) dia fihetsika steroid miadana, ary izany dia mahatonga azy ho malaza kokoa. Inona no soa azo amin'ny fampiasana steroid malemy? Arakaraky ny halavan'ny androm-piainany, ny fotoana lava indrindra dia haka ilay steroid mba handao ny vatana. Ankoatra izany, midika izany fa ny dosage Nandrolone Decanoate dia tsy voatery matetika. Tsy maintsy maka aingam-panahy ianao aorian'ny telo herinandro, fa tsy toy ny olon-kafa izay mety ilainao mba hahazoana aloka isan-kerinandro.
Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) dia miavaka amin'ny voka-dratsiny vitsivitsy ary mahatonga azy ho sariaka amin'ireo izay tia mikarakara tsara ny fahasalamany. Ny voka-dratsiny ratsy kokoa dia satria tsy dia mivadika amin'ny estrogen izy io.
Effects of Nandrolone Decanoate amin'ny fambolena
-Adinoy ny fanarenana
- Manatsara ny fahasalamana iombonana
- Mampiasà hery
- Mampianara ny masonteny mena
- Manomeza fahombiazana
Hanatsara ny fahasitranana
Nanatrika ny toeram-pandihizana foana ary tsy afaka nanao fikarakarana ara-batana noho ny reraka hatramin'ny asa farany nataonao? Taorian'ny fampiasana Nandrolone Decanoate, Ho hitanao fa afaka miala amin'ny fampiasana taloha ianao ary afaka manatontosa tsara kokoa amin'ny manaraka.
Hanatsara ny fahasalamana iombonana
Tsy misy fanaintainana miaraka amin'ny fampiasana ny Nandrolone Decanoate satria manome antoka fa salama tsara foana izy ireo.
Raha tsy ampy hery ianao, dia mety ho lasa zava-poana ny tanjonao. Etsy ankilany, raha mahazo hery ianao, dia afaka manandratra ny lanjany lehibe ianao ka mahazo misimisy kokoa. Nandrolone Decanoate vovoka Mampitombo ny herinao, mamela anao handresy ny lanjany amin'ny hery fara tampony.
Ampitomboy ny masarin'ny tebiteby
Nandrolone Decanoate dia mahavariana ny fahaizan'ny fanorenana hozatra, ary ny zavatra tsara dia ny fanampiana azy fotsiny lean muscle faobe.
Hanatsara ny fahaizanao
Mila manao ny fiatrehanao ny fiasanao? Ny fampiasana ny Decanoate Nandrolone dia hanampy amin'ny fanatontosana ny fotoam-pivoriana ara-potoana izay mamokatra bebe kokoa, ka mahatonga anao hahatratra ny tanjona izay efa nirinao nandritra ny fotoana fohy.
Ahoana no fanaovana Decandine Nandrolone (DECA)
Dingana 1: Mando ny vovoka Decanoate Nandrolone ho toy ny baoritra.
Dingana 2: Hanampy ny BA sy BB.
Dingana 3: Manomboka mamotaka ny solvents amin'ny vovoka. Ataovy moramora ny famafazana mba hanatsarana ny dingana.
Dingana 4: Manampia menaka sesame ho an'ny vahaolana ary atsangano tsara.
Dingana 5: Mametraka ny vahaolana mafana ao anatin'ilay angovo izay hampiasaina hanivanana sy hanamboarana fanjaitra ao anaty sivana.
Dingana 6: Kapohy ilay container
Chemika izay ilainao hanomanana izany
Nandrolone Decanoate Recipe ho an'ny DECA 50ml tsirairay amin'ny 200mg / ml
10grams Nandrolone Decanoate vovoka
Volamena sesame 32.50ml (Esory tsiron-kazo matromatika sy ireo izay mety tsy ho zakanao).
2.5 Benzyl alkohol 5% (Tsy mihoatra ny 5% BA ho an'ny fivoriana rehetra ataonao)
7.50ml Benzyl benzoate 15%
Vazivazy efa simba
.22 micron filters
Hanidina ny spoon
Fitsipi-dalao amin'ny antsipiriany momba ny fomba handraisana ny Nandrolone Decanoate
Dingana 1: Ataovy anaty savony ny vovoka Decanoate Nandrolone.
Izany dia atao amin'ny fanaovana taratasy kely iray, mametraka izany amin'ny haavony sy ny tsindrim-bovoka mba tsy ho tafiditra ny lanjan'ny taratasy rehefa mamehy ny vovony. Ampio kely ny vovo-tsolanao mba tsy ho voatery hikotikao rehefa mihoatra ny lanjanao vovony. Mba hahazoana antoka fa marina ianao, andramo kely izay ampy tsara ho an'ny gram. Raha vantany vao azonao ny grama folo, dia tsara izao ny mandeha.
Dingana 2: Ampio ny BA sy BB.
Dingana 3: Ny solvents dia manomboka mandoto ny vovony. Ataovy moramora ny famafazana mba hanatsarana ny dingana.
Afaka misafidy ny hampitony ny vahaolana amin'ny fampiasana bain rano mba haingana kokoa. Ahoana no anaovanao izany? Makà vilany iray amin'ny rano iray ary apetraho eo ambonin'ny fatana mba hafana. Alao ny labiera misy ny vahaolana ary apetraho ao anaty rano ny santimetatra vitsivitsy. Azonao ampiasaina koa ny rano mangatsiaka amin'ny kitay. Aza mafana loatra ny rano satria miteraka vokatr'izany ny fanamafisana izany.
Dingana 4: Ampio menaka sesame ho an'ny vahaolana ary asio mafy izany.
Ny menaka sesame dia tokony hanana hafanana mitovy amin'ny vahaolana hamelana ny vahaolana hikoriana tsara. Andramo ny hormona hikoriana izay mety niforona ary miantoka fa tsy misy na dia alohan'ny hidirana amin'ny dingana filetration.
Dingana 5: Ataovy ny vahaolana mafana Ao anatin'ilay angovo izay hampiasaina hanivanana sy hanisy fanjaitra ao anaty sivana.
Mampiasà fanerena kely amin'ny seranana mba ahafahan'ny vahaolana mandroso sy manolo ny sivana miaraka amin'ny vaovao rehefa tsikaritrareo fa mihamaivana ilay dingana.
Dingana 6: Kapohy ny fitoeran-drano
Raha vantany vao vita ny fizotran'ny filtration dia efa vonona ny fampiasana ny vahaolana. Kapohy ny fitoeran-drano mba tsy ho voaloto.
Raha ny mikasika ny fihinanana steroïde, dia misy karazany roa ny olona; ireo izay mividy Nandrolone Decanoate ho an'ny varotra ary ireo izay te-hody any an-tokantrano manala azy avy amin'ny Nandrolone Decanoate. Amin'ny fampiasana ny roa, dia iray ihany ny tanjona; mba hamoronana vatana tsara kokoa.
Raha toa ianao ka te-haka an-trano hividianana ny steroido, dia tokony hiezaka aloha ianao hanao izany. Amin'ny fanarahana ny toro-hevitra Nandrolone Decanoate nomena azy ahoana no fomba hanaovana an'i Deca, mety ho azonao tsara ny valiny. Fandaniana na fampiasana kely ny solvents na ny Nandrolone Decanoate vovoka Mety hisy fiantraikany amin'ny hatsaranao ny steroid.
Raha ny marina, miaraka amin'ny fitaovana mety sy ny fitaovana dia afaka mamindra ny Nandrolone Decanoate ianao ary hahatsara ny fahaiza-manaonao.
Nandrolone Decanoate, GJ Blokdijk, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, pejy 1-170
Anabolic Steroids and Athlete-2d, William N. Taylor. MD, pejy 39
Ny zava-mahadomelina, ny atleta, ary ny vokatra ara-batana, natontan'i John A. Thomas, pejy 27-30
Ny vovonam-pandehany dia nampiasaina ho an'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fery
Top Benefits Winstrol 15 Izay Ilainao Fantatra Alohan'ny Buy Winstrol Online
Ahoana ny fomba fampiasana Recipe trenbololone mba hanamboarana mofomamy fanosehana vatolônôna 2019 Ny Steroids Anabolic 10 malaza indrindra dia matanjaka